DFKMG ah oo sheegtey in dalka gudihiisa ay shir dib u heshiisiin ah ku qabanayso – SBC
DFKMG ah oo sheegtey in dalka gudihiisa ay shir dib u heshiisiin ah ku qabanayso
Iyadoo kala qaybsanaan xoogan ka dhexmuuqanayso xubnaha ama hogaanka golayaasha dawlada KMG ah ee Soomaaliya tan iyo markii uu qabsoomay shirkii wadatashiga ahaa ee ka dhacay magaalada Nairobi ee caasimada wadanka Kenya ayaa dawlada KMG ah ee Soomaaliya waxay shaaca ka qaaday qorshe ay ku sheegayso inay dalka gudihiis ku qabanayso shir dib u heshiisiineed.
Kulan ay golaha wasiirrada xukuumadda KMG ah ee Soomaaliya ay ku yeesheen xafiiska ra’iisul wasaaraha ee Muqdisho ayay kasoo saareen qodobbo ay ka mid yihiin in gudaha dalka lagu qabto 11-ka illaa 16-ka bisha June ee sannadkan shir dib u heshiisiineed oo ay kasoo qaybgalaan qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed oo ay ku jiraan kooxaha ka soo horjeeda Dowladda KMG ah ee Soomaaliya.
Kulankaasi ayaa lagu sheegay in xukuumadda KMG ah ajnadayaasha iyo macluumaadka shirka ay kala tashanayso dhammaan qaybaha uu khuseeyo oo ay ku jiraan beesha caalamka & Qaramada Midoobay.
Shirkan oo uu shir gudoominayey Ra’isalwasaaraha dawlada KMG ah ee Soomaaliya Maxamed C/llaahi Maxamed (Farmaajo) waxaa si weyn toosh loogu ifiyey in shirkii ku soo dhamaaday magaalada Nairobi aanu aheyn mid ka tarjunmaya danaha iyo maslaxada shacabka Soomaaliyeed, waxaana ay sheegeen in wax miro dhal ah aanu shirkaasi ka soo bixin.
Sidoo kale, qodobbada ayaa waxaa ka mid ahaa in la saaro guddi heer wasiir ah oo kasoo talo-bixiya habka ugu habboon ee lagu qaban karo shirka ka dhacaya dalka, kuwaasoo sida ugu dhaqsiyaha qorshahooda ugu soo gudbiya golaha wasiirrada.
Go’aanka ay xukuumadda KMG ah ku gaartay inay ku qabanayso shir watashi ah gudaha dalka ayaa imaanaya xilli xalay lagu soo gabgabeeyay dalka Kenya shir ay horay u qaadacday oo qodobadii kasoo baxay ay ka mid ahaayeen in lasoo doorto madaxweyne iyo guddoomiye baarlamaanka oo cusub inta aan la gaarin bisha Ogoosto ee sannadkan oo uu xilliga dowladdu ku ekaa.